अब नेपाल प्रहरीमा ५ जना मात्रै एआईजी !::Online News Portal from State No. 4
अब नेपाल प्रहरीमा ५ जना मात्रै एआईजी !
सशस्त्रमा २ जनाकाे दरबन्दी रहने निर्णय
बागलुङ, २४ जेठ – नेपाल प्रहरीमा अब ५ जना मात्रै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) रहने भएका छन् । बिहीवार गृह मन्त्रालयमा बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकसहित ५ जना एआईजीको दरबन्दी रहने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि प्राविधिकसहित प्रहरीमा १६ जनासम्म एआईजी पुगेका थिए । दलीय भागवण्डा मिलाउने नाममा प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी थप्ने तथा घटाउने क्रम चलिरहेको थियो । अब भने संघीय प्रहरी ऐनमै प्राविधिकसहित ५ जना एआईजीको दरबन्दी रहने व्यवस्था गरिने छ । सशस्त्रमा २ जना एआईजी
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वमा बिहीवार गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सशस्त्र प्रहरीमा २ जना एआईजी रहने निर्णय गरेको छ । तत्काल दरबन्दी मिलानका लागि ३ जना एआईजी रहने र पछि २ जनामा सीतित राख्ने निर्णय भएको गृह मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
प्रहरी महानिरीक्षकमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) सर्वेन्द्र खनालको बढुवासँगै रिक्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) का लागि १० जना डिआईजी मुख्य प्रत्यासीका रुपमा छन्। सरकारले गत ३० असार ०७४ मा बढुवा गरेका १५ डिआईजीमध्ये खनाल महानिरीक्षक भइसकेका छन् भने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट डिआइजी रमेशप्रसाद खरेलले राजीनामा दिएका छन्। यसैगरी भोगबहादुर थापा, पुष्कलराज रेग्मी र पुष्पचन्द्र रञ्जितको अनिबार्य अवकास पाएका छन्। यसले गर्दा प्रत्यासी संख्या १० मा झरेको हो। १० मध्ये ५ जना २९ माघ २०४६ र २०४५ असार ३० मा भर्ना भएका ५ डिआईजी छन्।
डिआईजीहरु पुष्कर कार्की, मनोज नेउपाने, ठुले राई, धिरु बस्नेत र सुरेशविक्रम शाह १० माघ २०४६ मा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। यस्तै ३० असार २०४५ मा सेवा प्रवेश गरेका उत्तमकुमार कार्की, पवनप्रसाद खरेल, छबिलाल जोशी, ज्ञानविक्रम शाह र शरद चन्द समेत नियमावली योग्यताका आधारमा अतिरिक्त महानिरीक्षक बढुवाका दावेदार हुन्। बढुवा बरियतामा एक नम्बरमा डिआईजी पुष्कर कार्की, दोस्रोमा उत्तमकुमार कार्की, तेस्रोमा पवनप्रसाद खरेल छन्। यस्तै बढुवा बरियता अनुसार क्रमश पवनप्रसाद खरेल, छविलाल जोशी, मनोज नेउपाने, ज्ञानविक्रम शाह, ठुले राई, शरद चन्द, धिरु बस्नेत र सुरेश विक्रम शाह रहेका छन्।